बिना मेकअप हिट यी अभिनेत्रीले २ करोड दिदा पनि गरिनन मेकअप! कारण यती अनौठो!
बैशाख २६, २०७८ BNCOM
दक्षिण भारतको चर्चित अभिनेत्री साई पल्लवी उत्कृस्ट अभिनयको कारण सबैमाझ चर्चित छिन् । दर्शकमाझ उनले एक छुट्टै स्थान बनाएकी छिन् । उनको आज २९ औ जन्मदिन परेको छ । अभिनेत्री साई पल्लवीले अहिलेसम्म तामिल, तेलुगु र मलयालम फिल्महरुमा अभिनय गरिसकेकी छिन् ।
सन २०१५ मा रिलिज भएको फिल्म प्रेमबाट अभिनयको सुरुवात गरेकी अभिनेत्रीले त्यसपछि कहिलेपनि बिगतलाइ फर्केर हेर्न परेन । साई पल्लबीको एक बिशेषता जसले सबैलाइ प्रभावित पारेको छ । उनि जुनसुकै फिल्महरुमा साधारण र कुनैमेकअप बिना देखा पर्छिन्। यो कुरा सुनेर दर्शक अचम्मित छन् ।
आजको समयमा युवतीहरु बीच एक अर्को भन्दा राम्रो देखिने प्रतिष्पर्धा चलिरहेको छ। साई पल्लवी धरै फिल्महरुमा बिना मेकअप अभिनय गर्छिन्। गर्नै परेमा पनि उनि हल्का मेकअपमा देखिन्छिन्। आजसम्मको फिल्महरुमा प्रायजसो उनि बिना मेकअप नै देखिएकी छिन् ।
साईले एक अन्तर्वार्तामा भनेकी थिइन्, उनको पहिलो फिल्म प्रेमम मा डाइरेक्टरले उनलाई बिना मेकअप अभिनय गर्न प्रोत्साहन गरेका थिए। त्यसपछि फिल्ममा काम गरेका डायरेक्टहरुले पनि उनलाई बिना मेकअप अभिनयको लागी प्रोत्साहन गरेका थिए । साई भन्छिन् कि उनी फिल्महरुमा मेकअप नगरी उनी जस्तो सबै केटीहरुको आत्मविश्वास बढाउन चाहन्छिन ।
अभिनेत्री साई चर्चामा आउनुको एक बिशेष कारण छ, जब उनलाई एक फेयरनेस क्रीमको विज्ञापनमा अभिनयको लागि अफर गरिएको थियो । बिज्ञापनमा अभिनय गरेको २ करोड दिने अफर गरिएको थियो। उनले उक्त्त प्रस्तावलाइ अस्विकार गरेकी थिइन्। उनले भनेकी थिईन कि यस्तो बिज्ञापनबाट मिलेको पैसाले के नै गर्नु छ र ? अगाडी उनले थपिन, “म घर जान्छु, तीन ओटा रोटी र भात खानेछु । मेरो आवश्यकता धेरै कम छ।”
प्रकाशित : आइतबार, बैशाख २६, २०७८१३:२८
अभिनेत्री करिना कपुरले सार्वजनिक गरिन आफ्नो कान्छो छोराको तस्बिर!
के तपाइको बच्चाहरुले माटो खाने गर्छन? किन खान्छन त, जानिराखौ यस्ता कारण!
२३ घण्टा अगाडि BNCOM
१७ बर्षमा १ सय ९२ पटक ट्रायल फेल भएर एक व्यक्तिले बनाए नयाँ रेकर्ड!
१ दिन अगाडि BNCOM
बृहस्पति कुम्भ राशिमा प्रवेश गर्दै, कुन राशिमा राशिमा कस्तो असर पर्नेछ? हेर्नुहोस!
१ हप्ता अगाडि BNCOM
राइमा सेन बिकिनी अवतारमा स्विमिंग पुलमा मस्ती गर्दै, तस्बिर तिब्र रुपमा भाइरल हुदै!
टाइगर श्राफकी बैनीको बिकिनीमा ह-ट अवतार, सामाजिक संजालमा भाइरल!